दुर्लुङ अर्थात् नेता जन्माउने गाउँ
राजु पौडेल, कुस्मा । एउटा पहाडी भू–बनोटमा अडेको गाउँ । जहाँ बहुजातीय र बहुभाषिक व्यक्तिहरूको मिश्रित बसोबास रहेको छ । पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका वडा नं. ३ दुर्लुङ अर्थात् नेता जन्माउने थलो ।
दुर्लुङ सदरमुकाम, कुस्माबजारदेखि उत्तरपूर्वी मोहडामा करीब पौने घण्टाको दुरीमा अवस्थित भूगोल हो । यस थलोले विगतमा मन्त्रीदेखि सांसद, जिल्ला पार्टी अध्यक्ष तथा जिल्ला सभापति–उपसभापतिसम्मका प्रमुख व्यक्तित्व जन्माएको छ । तरपनि, विकासका दृष्टिकोणले यो गाउँ धेरै पछाडि रहेको छ ।
पञ्चायतकालमा जिल्ला सभापति हुँदै मन्त्रीसम्म बनेका क्षेत्रबहादुर गुरुङलाई दुर्लुङले जन्मायो । उनले लामो समय पर्वतको राजनीतिक केन्द्रमा रहेर काम गरे तर, पनि दुर्लुङको भौतिक विकासमा थोरै चुके । दुर्लुङले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास यतिबेला पनि पाउन सकेन । त्यस्तै नेपाली काँग्रेस पर्वतमा ०४८ सालमा सांसदको टिकट ल्याउन सफल नवराज गुरूङलाई जन्मायो । उनले टिकट पाए, चुनाव जित्न सकेनन् । त्यतिमात्र नभएर उनले ०७० को चुनावमा समेत काँग्रेसको तर्फबाट पर्वत क्षेत्र नं. २ को टिकट पाए तर हारे । फेरि ०७४ मा प्रदेशसभाको टिकट लिएर पनि उनी सफल हुन सकेनन् । तर, नेपाली काँग्रेसको पार्टी सभापति भएर भने उनले काम गरिरहे । यसैगरी नेपाली काँग्रेस पर्वतको सभापति भएर पार्टी हाँकिसकेका लालकाजी गुरूङलाई पनि सोही दुर्लङले जन्माएको हो । पूर्व जिविस सभापति इच्छाबहादुर गुरूङ र उपसभापति खड्कबहादुर गुरुङजस्ता व्यक्तित्वहरू समेत दुर्लुङ गाउँले जन्मायो । तर सबै नेताहरूका पालामा केही न केही त विकास भए होलान् तर, अपेक्षा गरेझैं विकास हुन अझै सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक उतारचढावसँगै संसदीय क्षेत्रमा अवसर नपाएका दुर्लुङले जन्माएका नेता नेपाली काँग्रेस पर्वतका पूर्व सभापति लालकाजी गुरूङलले नेपाली काँग्रेसको समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन हुने अवसर पाएका छन् । पछिल्लो पटक सोही नेता जन्माउने गाउँले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमाले पर्वतका अध्यक्ष एवं एमालेको तर्फबाट देशकै कान्छो सांसद पाएको छ । पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको स्ववियु सभापति भएर चर्चा बटुलिसकेका पदम गिरी दुर्लुङ गाउँले जन्माएका युवा हुन् । एउटै गाउँबाट यति धेरै नेताहरू जन्माएको भएपनि दुर्लुङेहरूको तीव्र विकासको चाहना भने अझैसम्म पूरा हुन सकिरहेको छैन । एउटै गाउँले कहिले मन्त्री पायो, कहिले सभापति, उपभासपति, हरेक पार्टीका जिल्ला अध्यक्षहरू पाइरहँदा समेत विकासमा खासै परिवर्तन अनुभव गर्न नकेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
दुर्लुङ काफलचौर माविका शिक्षक नारायण पौडेल भन्छन्, ‘दुर्लुङ भनेको नेता जन्माउने गाउँ हो, तर आजका मितिसम्म हामीले तीव्र विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं ।’
यो पटक प्रत्यक्षतर्फ एमाले पर्वतका युवा नेता पदम गिरी र समानुपतिकतर्फ नेपाली काँग्रेसका पूर्वपार्टी सभापति लालकाजी गुरूङ सांसद बनेका छन् । दुर्लुङ काफलबोटका देवराज शर्मा भन्छन्, ‘दुर्लुङ नेता जन्माउने नामले सबैतिर परिचित छ, यहाँको कृषि, पर्यटन लगायतका सम्भावना उजागर गर्न सके धेरै नेता भएको अर्थ हुन्थ्यो ।’ उनले कुस्माबजारबाट पौनेघण्टा जाने सडक समेत अझैसम्म पिच हुन नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गरे । पौडेलले थपे,‘दर्जनबढी नेता दुर्लुङमा छन्, कयन् वर्ष भयो धुलो खानुपरेको आजसम्म कुस्मादेखि पौनेघण्टा लाग्ने दुर्लुङ पुग्ने बाटो पिच हुन सकिरहेको छैन । यो भन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?’ अबका नेताहरूले दुर्लुङ लगायतका समग्र पर्वतको विकास गर्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए ।